Ngokuvuswa kweNcwadi eNkulu AA | XperimentalHamid
Ngokuvuswa kweNcwadi enkulu uAA
Matshi 16, 2020 by Qasim Khan
ngaphambi kokufudukela Ukuvuka inxalenye ye incwadi enkulu ka-AA Makhe sixoxe ngeAA. I-Alcoholics Anonymous (AA) yinkqubo esekwe eluntwini, enobukho behlabathi obenzelwe injongo yokunceda, kwabo banengxaki yokusela. Inkqubo yeAA inceda abo bangaseli gwenxa okanye abamodareyithayo ngokunika oontanga babo abathi emva kweentlanganiso zemihla ngemihla kunye neencoko ezijikeleze umxholo wokuxhasa iziyobisi kwabo basokolayo ukuze babe nesidima.
Inkqubo ye-AA inika amadoda kunye nabasetyhini indawo yokuba bahlangane babelane ngamava, baphinde bafumane ngokupheleleyo isiselo esinxilisayo kwaye bahlale bezolile, bengaphindeli kwakhona. Uluvo olupheleleyo lwale nkqubo lujikeleza kwinkolelo yokuba ukuba likhoboka lotywala kukugula okunokulawulwa, kodwa kungalawulwa.
Umntu ozimisele ukuxhamla kwinkqubo ucelwa ukuba abe nomnqweno wokuyeka ukusela. Ukuba umntu uyavuma, Inkqubo yenyathelo eli-12 Uyaphunyezwa ukuze kufezekiswe ukubuyela kwimeko yesiqhelo kunye nokugcina ucoceko.
Ekuphaphameni: iphepha lama-86 ukuya kwelama-88 leNcwadi yeeAA ezinkulu
iphepha elikhulu lencwadi 86 kunye ne-87
Ngokuvuka sisiqendu esivela kwi Incwadi enkulu yencwadi ukuqala kwiphepha 86 ukuya kwi-88, elijolise ekucamngca. INcwadi eNkulu ikhuthaza umfundi ukuba avuke ukuba acinge malunga neeyure ezingama-24 ezizayo. Ithoba umfundi ukuba acele ngokuthobeka uThixo ukuba alathise iingcinga, azisulungekise kwiinjongo zokuzingca, njengoko enceda umntu ukuba acoce iingcinga ezimbi kunye neenjongo zehlabathi.
Kwimeko ukuba ujongene nokuthandabuza kwimicimbi yemihla ngemihla, malunga nento ekufuneka uyenzile kunye nendlela yokwenza, incwadi icebisa umfundi ukuba acele ukuphefumlelwa, ukucinga okanye isigqibo kunye nokuphumla, iimpendulo ziya kuza ngokulandelelana, ngaphandle komzabalazo wakho icala.
Ngokuziqhelanisa, ezi kanye ngexesha lokuzingela ziya kuba yinxalenye yokusebenza kwengqondo. Kwaye ngokuziqhelanisa, kunye nexesha, ukucinga kuya kuba ngakumbi nangaphezulu kwindiza yempefumlelo evela kuThixo. Kakhulu kangangokuba umntu unokuxhomekeka ngokupheleleyo kuyo ngenye imini.
Eyona ndlela ilungileyo yokuqukumbela eli xesha lokucamngca, yatsho le ncwadi, ngumthandazo ocela isikhokelo sentshukumo yethu phambili nokunceda ukoyisa iingxaki zethu. Qhubeka kuThixo ukuze ulawule ukuthanda kwakho kwaye ucele uThixo ukuba angasiguquli ekubeni zizidenge, kufuneka sihlale sibakhumbula abanye.
Ukuba kunokwenzeka umfundi uyakhuthazeka ukuba abandakanye usapho kunye nabahlobo ukuze bazimanye bacamngce kusasa.
Njengoko imini ihamba kwindlela yexesha, umfundi ucelwa ukuba anqumame nangaliphi na ixesha xa kukho amathandabuzo kunye nokuphazamiseka, aze ngokuzithoba acele iingcinga nezenzo ezifanelekileyo. Ke ngokuthe ngcembe umntu uya kukwazi ukulawula iimvakalelo ukuba angabi nomsindo, unxunguphele, usisidenge, uthandabuze kwaye uyazisizela. Ngokuthe ngcembe, impumelelo iya kubanjwa, iminqweno yezinto zehlabathi nezinto zayo ziya kutshabalala njengoko umntu engasayi kuba uchithe amandla kwimizamo yokuhlengahlengisa ubomi.
Umntu olikhoboka lotywala ngumntu ongaqeqeshwanga, ke lo mbhalo wenzelwe ukuhambisa imiphefumlo yabantu ngokuthanda kukaThixo. Ukuze uqeqesho lube nokufezekiswa ebomini.
Isicatshulwa esivela kwiNcwadi eNkulu AA: Iphepha 86-88 - "NGOKUFUYELA"
AA Incwadi eNkulu iphepha 86
Isicatshulwa sokuqala kwiNcwadi eNkulu AA malunga nokucamngca kwangoko emva kokuvuka ukuqala usuku olutsha kunikezwe apha phantsi.
“Ekuvukeni masicinge malunga neeyure ezingamashumi amabini anesine ngaphambili. Sijonga izicwangciso zethu zosuku. Ngaphambi kokuba siqale, sicela uThixo ukuba akhokele indlela esicinga ngayo, ngakumbi sicela ukuba yahlukane nokuzisizela, ukunganyaniseki okanye iinjongo zokuzifunela. Ngaphantsi kwezi meko, sinokusebenzisa amandla ethu engqondo ngesiqinisekiso, kuba emva kwayo yonke into uThixo asinike yona ukuba siyisebenzise. Ubomi bethu bokucinga buya kubekwa kwindawo ephezulu kakhulu xa ukucinga kwethu kususwe iinjongo ezingalunganga.
Ukucinga ngexesha lethu sinokujongana nokungathandabuzi. Sisenokungakwazi ukumisela ukuba yeyiphi na ikhosi. Apha sicela uThixo ukuba asinike impembelelo, ingcinga enokwenzeka okanye isigqibo. Siyaphumla kwaye sikuthathe lula. Asizabalazi. Sisoloko simangaliswa yindlela iimpendulo ezichanekileyo eziza ngayo emva kokuba sizame oku okwethutyana.
Into ebekufanele ukuba iy Hunch okanye ukuphefumla ngamanye amaxesha iba yinxalenye yokusebenza kwengqondo. Kuba singenamava kwaye sinxibelelana nje noThixo, akunakufane kwenzeke ukuba siphefumlelwe ngamaxesha onke. Sinokuhlawula oku kucinga kuzo zonke iintlobo zezenzo ezingenangqondo kunye nemibono. Nangona kunjalo, sifumanisa ukuba ukucinga kwethu kuya kuthi, njengoko ixesha lihamba, liya kuba likhulu ngakumbi kwiplanti yokuphefumlelwa. Siza kuxhomekeka kuyo.
Sihlala sigqiba ixesha lokucamngca ngomthandazo ukuba siboniswe imini yonke ukuba inyathelo elilandelayo liza kuba yintoni, ukuba sinikwe nantoni na esiyifunayo ukuze sinyamekele ezo ngxaki. Sicela ikakhulu inkululeko yokuzikhethela kwaye silumke ukuba singaceli thina kuphela. Sinokuzibuza ngokwethu, nangona kunjalo, ukuba abanye baya kuncedwa. Silumkele ukuba singaze sithandazele iziqu zethu. Uninzi lwethu lichithe ixesha elininzi lisenza lonto kwaye alisebenzi. Ungasibona ngokulula isizathu.
Ukuba iimeko ziyavuma, sicela abafazi bethu okanye abahlobo bethu ukuba basidibanise nathi xa sicamngca ekuseni. Ukuba sikwicawa yenkolo efuna ukuzinikezela okuqinisekileyo, siyayitholela loo nto. Ukuba ayingamalungu amaqumrhu enkolo, ngamanye amaxesha sikhetha kwaye sicengceleze imithandazo embalwa esetiweyo egxininisa imigaqo esithethe ngayo. Zininzi iincwadi eziluncedo. Iingcebiso ngezi zinto unokuzifumana kubabingeleli, kumphathiswa, okanye rabi. Khawuleza ubone apho bakhoyo abantu abanenkolo. Sebenzisa izinto abanika zona.
Njengoko siqhubeka nosuku esimisa kulo, xa sikhathazekile okanye sithandabuza, kwaye sibuze ngengcinga okanye isenzo esifanelekileyo. Sisoloko sizikhumbuza ukuba asisaqhubeki mboniso, ngokuzithoba sithi rhoqo izihlandlo ezininzi suku ngalunye "Intando yakho mayenziwe." Sisengozini encinci yolonwabo, uloyiko, umsindo, ukukhathazeka, ukuzisizela, okanye izigqibo zobudenge. Siba ngabasebenza ngakumbi. Asidinwa ngokulula, kuba asitshisi amandla ngobudenge njengokuba sasinjalo xa sasizama ukucwangcisa ubomi ukuze sizilungele. ”
iindidi iincwadi tags incwadi, Tips Post yokukhangela
Ngawaphi la manyathelo ali-12 ee-AA avela kwiNcwadi eNkulu
Izinto ezizezinye kwiAA (Alcoholics Anonymous)